EPT: mpiasa maro nampidirina MD | Hevitra MPANOHARIANA
EPT: mpiasa maro nampidirina MD
2007-04-19 @ 07:19 in Toekarena
Asa na efa mivoaka an-gazety ity raharaha ity fa tsy hitako amin’ny voalohan’ny pejy amin’ireo gazety hitako teny an-dalana moa. Somary nahavariana raha tsy mba tsikaritry ny gazety ny fisian’ity raharaha ity na dia izany aza ka tena tsy fantany tokoa. Mety ho tsy manana loharanombaovao momba io koa moa ry zareo na dia izany aza.
Ny EPT aloha dia « Engineering pour tous » no fanalavana azy. Ny fahazoan’ny olona azy dia saika ity no nasolon’ny filoha Ravalomanana ny Fid « Fonds d’intervention pour le développement » izay efa nijoro talohan’ny nahafiloha azy. Nieritreritra izy fa olon’ny fitondrana teo aloha ny maro miasa ao amin’ity Fid ity ka tsy nananany fitokisana loatra ilay orinasa. Noho izany niezaka izy nametraka ny olona noheveriny ho azo itokisana kokoa ho hisahana ilay orinasa aloha, dia niezaka ihany koa izy nanao karazana orinasa mirazotra (parallele) hampiasana araka ny tokony ho izy ny vola. Averiko indray, izay no fahazoan’ny olona azy nandritra ny taona vitsivitsy nijoroan’ity orinasa EPT ity. Nampanaovina ny ambinambin’asa fotsiny sisa ny Fid nandritra ny fe-potoana voalohany nahafiloha an-dRavalomanana. Hagagana moa ny an’ny manodidina raha « nizarana » fiara mahazaka lalantsarotra (4x4 na 4WD) ireo mpiasan’ny EPT ambonimbony tsirairay indray maka.
Kanjo dia nisy iny fisamborana ny lehiben’ny Fid nahitsy hoe raharaha EPT no nisamborana azy iny. Teo vao gaga ny rehetra, mbola misavoritaka an-tsain’ny maro ny raharaha hatramin’izao. Tsy fantatra intsony izay tena marina. Ny filoha ve sa Atoa Davida Rajaon no nanangana ny EPT ? Ny filoha sa ny DGn’ny EPT no nanome baiko hampiasa ny volan’ny Fid ho an’ny EPT ? orinasa tena mijoro ara-panjakana tokoa ve ny EPT ? taratra avy amin’izany fa politika avo no miasa ao anatin’izany rehetra izany.
Ankehitriny, nanomboka afak’omaly 17 avrily 2007 dia re fa mpiasa maro ao amin’ny EPT no nampidirina Mandat de dépôt na MD. Eo no mampitombo ny fahagagana. Inona no helok’ireo mpiasa ireo raha mba voafitaka ihany koa izy ? Mety ho nanaraka ny fomba nakana mpiasa tsara no nakana azy ireo. Nandray ny karamany isam-bolana izy nefa hay orinasa zavona (tahaka ny Procoops) fotsiny ity orinasa ity, araka ny fahazoako azy amin’izao fotoana izao aloha. Raha fanadihadiana tsotra ny mpiasa dia aleoko ihany fa ny fampidirana am-ponja ny mpiasa kosa ataoko fa sao dia tafahoatra loatra ?
Ataoko fa noho ny raharaha Rolland Ratsiraka any Toamasina manarona ny raharaha hafa rehetra no mety tsy ahafantaran'ny maro loatra ity raharaha ity.
Tena raharaha marina tokoa izy izany. Dia misaotra anao aloha Rajentl nizara ny vaovao.
Inona tokoa ary moa no heloky ny mpiasa @ izany raha toa ka hoe ny maha-mpiasa azy tao fotsiny no isamborana azy (hafa indray raha ohatra ka resaka fangalarana)? Raha ny fahazoako ny vaovao eto dia hoatry ny hoe nosamborina ny mpiasa satria mpiasana orinasa fantome, sa tsy izay???
Tsy zava-baovao io fisehoan-javatra io raha ity tranga lazaiko anareo manaraka ity. PSDR: 3 taona lasa izay dia nilofo t@ resaka fambolem-bary ny Psdr, natao daholo izay tetikasa rehetra momba ny fambolem-bary,(asa raha tadidintsika fa niseho t@ tele matetika ny Psdr nizara zezika, dia alaina sary miaraka @ kamio eo daholo ny tompon'andraikitra voakasika rehetra :-)). Ary dia natontona tao @ fambolem-bary daholo ny vola rehetra. Izany rehetra izany moa dia noho ny baikon'ny... filoha. Nony tonga Ramatoa Mpanaramaso avy any @ mpamatsy vola dia TEZITRA. ??? Hay ny tena izy dia tokony nampiasaina tamina tetikasa maro ny vola fa tsy amina tetikasa iray na telo fotsiny fotsiny. Vokany: ni-saute daholo ny sefo rehetra nanomboka tany @ lohany. Ny MPANOME ny baiko (izay tsy nifanaraka t@ mpamatsy ny tetikasa) tsy te hahalala fa izay nifafa ny kihony dia nifafa any.
Tsy fantome akory ny Psdr, ary tsy mitovy ny tranga fa ny itovizany (araka ny fijeriko) dia ny PRINCIPE. Hoy ny NGEZA hoe izao atao, nefa rehefa avy eo izy miala-pa, dia ianao izay nanaraka ny teniny (satria tsy te ho afaka asa) no miantoka. Ary eto dia mety hatr@ olona tsy manan-tsiny no afa-baraka.
Nampidirin'i K.wasi @ 20:57, 2007-04-19 [Valio]
Tsy fantome akory lay Engeneering Pour Tous fa mpanatanteraka asa toy ny FID ihany fa nanamboaran'ingahy David Rajaon departementa iray tao amin'ny Fid teo am-piandohana.Taty aoriana dia nosarahina tanteraka tao amin'ny Fid ary efa mandeha mitokana mihitsy io projet io ankehitriny nefa dia tsy afaka mihitsy fa voaroiroy foana miaraka @ raharaha david Rajaon.
Mba izay kely zay no fahafantarako le Education Pour Tous,Engineering Pour Tous (Ept) nentina nilazana azy daholo ireo.Mety mijaly nge ny mpiasa amin'izao e.
Dia ahoana izao no fijerin'ny filoha izao toe-javatra izao
Nampidirin'i mahatafa @ 10:03, 2007-04-20 [Valio]
Nampalaza ny Fid ny fananganana sekoly fa avy eo dia lasan'ny Ept avokoa ireo vinavinan'asa momba izany sy ny lalana. Izay no nahatonga ahy hanoratra hoe ambin'asa sisa no nataon'ny Fid
Nampidirin'i jentilisa @ 10:19, 2007-04-20 [Valio]